बादललाई प्रश्न- प्रचण्डसँग ४० वर्षको सहयात्रा तोडेर ओलीलाई साथ दिनुको रहस्य के हो ? — Raranews.com
रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७८/२/१७ गते
यसबारे उनले नेकपा एमालेको मुखपत्र नवयुगमा खुलासा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, किरण भट्टराईले बादलसँग नवयुगका लागि गरेको अन्तर्वार्ता नेपाल टकमा
० तीन वर्ष पहिले भएको पार्टी एकता एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो । तर एकीकरणलगत्तै समस्याहरू देखा परे र झन बल्झिदै गए । पार्टीलाई विभाजनमा जान नदिन तपाईं स्वयम् पनि क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो । तर एकता जोगिन सकेन । विभाजनको मुख्य कारण र कारक केलाई ठान्नुहुन्छ ?
निश्चय पनि तीन वर्षपहिले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुई ठूला धारहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको एकीकरण नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा असाधारण परिघटना थियो । यो परिघटनाले एकातिर जनतामा खुसी र उत्साहको सञ्चार गर्‍यो भने अर्कोतिर प्रतिक्रियावादी कित्तामा चिन्ता र आक्रोश पनि पैदा गर्‍यो । सामन्तवादका विरुद्ध जनवादी क्रान्ति आधारभूतरूपमा सम्पन्न भएपछि समाजवादको आधार निर्माण गर्न यो ऐतिहासिक आवश्यकता उत्पन्न भएको थियो । यो नेपाली जनता, पार्टी कार्यकर्ता तथा मित्रहरूको चाहना पनि थियो ।
साबिक माओवादीभित्र संस्थागत भएको गुटवादी प्रवृत्ति जसको नेतृत्व मुख्यतः कमरेड पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले गर्नुहुन्थ्यो, गर्दै हुनुहुन्छ । ऐतिहासिक तथ्यहरूले के पुष्टि गर्दछन् भने दुवै प्रतिनिधि पात्रहरूले दशकौंदेखि सत्ता र नेतृत्वमा आफ्नो हालीमुहाली र एकाधिकार कायम गर्दै आएका थिए ।
० पार्टीको कानुनी विभाजनसँगै तपाईं आफ्नो समग्र राजनीतिक लिगेसीलाई छाडेर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुभयो, राजनीतिक हिसाबले नेकपा (एमाले) को नेताका रूपमा स्थापित हुनुभयो । कुन बिन्दुमा तपाईं निष्कर्षमा पुग्नुभयो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मात्रै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सम्भव छ ?
यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा म प्रधानमन्त्रीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुको अर्थ फुटका विरुद्ध एकताको पक्षपोषण गर्नु हो । यसको राजनीतिक अर्थ समृद्धि र समाजवादको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु हो, सङ्घर्ष गर्नु हो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा नै समाजवादको संरचना खडा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसैले, म प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिनुको अर्थ ः राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको पक्षमा दृढ समर्थन पनि हो ।
मैले आफ्नो समग्र राजनीतिक ‘लिगेसी’ छाडेर एमालेको ‘लिगेसी’ अङ्गीकार कदापि गरेको होइन । मेरो अडान र पक्षधरतालाई यो रूपमा बुझ्नु/बुझाउनु उचित होइन । निश्चय पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कानुनी रूपमा त्यसो हुन गएको प्रतीत हुन्छ । एकता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रवाद, समाजवाद मेरो विगतको लिगेसी थियो । आज पनि त्यही हो ।
एमालेको लिगेसी पनि त्यही थियो, त्यही छ । त्यसैको परिणामस्वरूप नै एकीकृत पार्टी (नेकपा) को जन्म भएको थियो । निश्चय पनि अदालतको आदेशले पुरानो स्वरूपको एमाले स्थापित गरिदिएको छ । तर, आज हामीले पुनर्निर्माण गरेको पार्टी सारतः नयाँ एमाले’ हो, एकीकृत पार्टीको निरन्तरता हो, त्यसको नयाँ स्वरूप हो ।
२०७५ जेठ ३ गते मैले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रमुख नेताका रूपमा स्वीकार गरेको थिएँ । एमालेले नवौं महाधिवेशनमा उहाँलाई प्रमुख नेताका रूपमा निर्वाचित गरेको थियो । त्यसैले गुटवादीहरूले कमरेड ओलीलाई प्रमुख नेतृत्वबाट अपदस्थ गर्न खोज्दा म नेतृत्वको रक्षा गर्न दृढतापूर्वक उभिएको हुँ
० प्रचण्डसँग तपाईंको ४० वर्षभन्दा लामो सहयात्रा रह्यो । यो अवधि अन्तरसङ्घर्ष र एकताका विभिन्न चरणबाट गुज्रिएको छ । आज प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता, उपयोग र अवसरवादको पर्यायवाचीजस्तो बन्न पुग्नुभएको छ । नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डलाई वैचारिक राजनीतिक रूपमा कसरी चरित्र चित्रण गर्नुहुन्छ ?
सामान्तवाद विरोधी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा कमरेड प्रचण्डसँग चार दशकभन्दा लामो अवधिसम्म मेरो सहकार्य भयो । यो समय निकै उतारचढाव र उथलपुथललको बीचबाट गुज्रियो । निश्चय पनि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कमरेड प्रचण्डको भूमिकालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नु ‘पूर्वाग्रही’ बन्नु हुनेछ । यो पनि त्यत्तिकै सत्य हो- नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको विघटन/विसर्जनमा पनि उहाँको उत्तिकै उल्लेखनीय भूमिका रह्यो, त्यो निरन्तर जारी छ ।
निःसन्देह कमरेड प्रचण्डको मूल प्रवृत्ति र विशेषता निम्न पुँजिवादी अधैर्यता, अस्थिरता र अविश्वसनीयता नै हो । वैचारिक दृष्टिले सारसङ्ग्रहवाद, राजनीतिक दृष्टिले अवसरवाद, साङ्गठनिक रूपमा व्यक्तिवाद (एकैसाथ नोकरशाही, एकाधिकारवाद र व्यक्तिवादी अराजकवाद),
व्यावहारिक एवम् सांस्कृतिक रूपमा व्यक्तिवादी उपयोगितावाद उहाँका विशेषताहरू हुन् । प्रत्येक विषयलाई ‘कार्यनीतिक’ रूपमा अभ्यास गर्नु, अन्तरविरोधहरूलाई उपयोग गर्नु, अन्तरविरोध सिर्जना गर्नु, त्यसमा खेल्नु÷खेलाउनु नै हुन् । पछिल्लो दृष्टान्त पार्टी एकता र यसबाट सिर्जित परिघटनाहरू हुन् ।
० नेपाली राजनीतिमा माओवादी आन्दोलनको स्थानलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
० नेकपा (एमाले) र माओवादी दुईवटा फरक स्कुलिङ, अभ्यास र पृष्ठभूमिबाट हुर्किंदै आए । खास अवधिमा ती दुईबीच निकै तिक्तता र निषेधको अवस्था पनि रह्यो । आज नेकपा (एमाले) लाई आन्दोलनका दुवै धारका असल परम्पराको प्रतिनिधि पार्टीका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक एकताका लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
समाज र प्रकृति अर्थात् जीवन र जगतको परिर्वतनका वस्तुगत नियमहरू हुन्छन् । ती नियमहरू स्वतःस्फूर्त रूपका साथै सचेत हस्तक्षेपद्वारा क्रियाशील भइरहेका हुन्छन् । मानिसको सचेत एवम् साङ्गठनिक हस्तक्षेपद्वारा निरन्तर समाजमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छन् । मानिसले स्वयम् र प्रकृतिलाई विचार, सिद्धान्त, नीति कार्यक्रम, योजनामार्फत हस्तक्षेप गर्दै रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अभ्यास गर्दछ । निःसन्देह विगतमा एमाले र माओवादी फरक-फरक स्कुलिङ र अभ्यासबाट हुर्किंदै आएका हुन् । ती नकारात्मक परिघटनाहरू हामीले अवलम्बन गरेका विपरीत नीतिहरूका परिणाम थिए । तर, हामीले यो पनि कदापि बिर्सन हुँदैन, समान्तवाद-समाजवादका विरुद्धको सङ्घर्षमा एकअर्काको परिपूरकको भूमिका पनि हामीले निर्वाह गर्दै आएका हौं । त्यसैले त्यही कारणले युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो । त्यसैको परिमाणस्वरूप पार्टी एकीकरणको बीजारोपण भएको हो ।
आज दुवै पक्षका फुटवादी प्रवृत्तिहरू अलग भए पनि सकारात्मक प्रवृत्तिहरू नया“ आधारमा एकताबद्ध भएका छौं । अब एकीकृत पार्टीलाई सुदृढ गर्न विचारधारात्मक दृष्टिले मार्क्सवाद-लेनिनवाद, नेपालको विशेष सन्दर्भमा जबजको समृद्धीकरण अपरिहार्य बन्न गएको छ । विचारधारा वा सिद्धान्त फगत जडसूत्र होइन, हुनु पनि हुन्न । यो जीवन र जगत्का परिवर्तन सँगसँगै विकसित हुनुपर्दछ । राजनीतिक दृष्टिले समाजवादको मोटो रूपरेखा कोरिएको छ । तर, नेपालको विशिष्टताअनुरूप समाजवादको ठोस मोडेल निर्माण गर्न निरन्तर प्रयास गर्नु आवश्यक छ । समृद्धि र विकासका आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र जनपरिचालनमा जोड लगाउनुपर्दछ ।
साङ्गठनिक दृष्टिले, जनआधारित पार्टी, अनुशासित र सक्रिय सदस्यहरू, जनप्रिय कार्यशैली तथा वैचारिक स्पष्टता प्राप्त गर्न सङ्गठनमा निरन्तर प्रशिक्षण, अन्तक्र्रिया, जनसंवाद, आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक हुन्छ । यी कुरा मात्र पर्याप्त होइन, सङ्गठनको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि भावनात्मक एकता र अन्तरघुलन झनै जरुरी हुन्छ । परस्पर सम्मान, स्नेह, सद्भावका साथै एकअर्काका निम्ति निःसर्त बलिदान, समर्थन र सहयोगले नै गहिरो भावनात्मक एकता एवम् अन्तरघुलन पैदा हुन्छ । यसले सङ्गठनलाई आत्मानुशासित र सुदृढ बनाउँछ ।
० तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीका कुन पक्षले बढी आकर्षित र प्रभावित गर्‍यो ?
प्रधानमन्त्रीज्यूको ‘सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने’ दृढता, महाशक्तिसँग जुध्ने अदम्य देशभक्ति, देश र जनताका लागि आफ्नो स्वास्थ्यको वास्ता नगरी १८ घन्टासम्म काममा निरन्तर खटिने लगनशीलता छ । जनविरोधी र शत्रुहरूलाई तीखो व्यङ्ग्य-वाणद्वारा घोच्ने, जनतालाई ठेट नेपाली विम्ब र उखानटुक्काद्वारा उत्साहित र उप्रेरित गर्ने, सिद्धान्तप्रति निष्ठा, स्पष्टवक्ता, आत्मविश्वास, सरलता, कार्यकर्ताप्रति स्नेह र संरक्षण सायद यिनै पक्षहरूले मलाई प्रभावित र आकर्षित गर्‍यो कि !
० अझै पनि तपाईंनिकट धेरै युवाहरू माओवादी केन्द्रभित्र छन्, के सन्देश दिनुहुन्छ ?
लुम्बिनी, उपनिर्वाचनमा काँग्रेसका उम्मेदार पाण्डे विजयी